Isimo sezulu esibandayo eSpain: amazinga okushisa azokwehla kusukela kusasa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ubusika buzobonwa kulo lonke elaseSpain kusukela kusasa, ngoLwesihlanu. I-State Meteorological Agency (Aemet) isimemezele ukufika kwendawo ebandayo ezoletha izimvula ezinkulu, iqhwa emazingeni aphansi kakhulu nemimoya enamandla enyakathoNgakho-ke uma ungakakwenzi, sekuyisikhathi sokukhipha izingubo zakho ezifudumele ukugwema imikhuhlane (noma ukuyivimba ukuthi ingabi kubi kakhulu).
Lesi simo singenxa yokuthi i-Azores anticyclone njengamanje isenyakatho-ntshonalanga yenhlonhlo, ukuze uhlelo oluphansi lwengcindezi olusenkabeni yeYurophu lube nendlela ekhululekile yokuthuthela eningizimu, ikakhulukazi ezindaweni ezizungezile. I-Italy.
1 Yini elindelwe ezinsukwini ezimbalwa ezizayo?
1.1.1 Isibikezelo semvula sangoLwesihlanu
1.1.2 Isibikezelo semvula sangoMgqibelo
1.1.3 Isibikezelo semvula ngeSonto
1.2.1.1 Isibikezelo sethempelesha sangoLwesihlanu
1.2.1.2 Isibikezelo sethempelesha sangoMgqibelo
1.2.1.3 Isibikezelo sethempelesha ngeSonto
1.2.2.1 Isibikezelo somoya sangoLwesihlanu
1.2.2.2 Isibikezelo somoya sangoMgqibelo
1.2.2.3 Isimo sezulu sangeSonto
Yini elindelwe ezinsukwini ezimbalwa ezizayo?
Ngokusho kuka-Aemet, kuzophikelela enyakatho enkulu yenhlonhlo. Kwezinye izindawo zesigamu esisenyakatho, ezinye izimvula zingana, kepha bezizoba buthakathaka kakhulu. Ake sihlolisise imodeli ye-Hirlam:
Isibikezelo semvula sangoLwesihlanu
NgoLwesihlanu enyakatho yeNhlonhlo Yase-Iberia zazingawela zisuka ku-5 ziye ku-10mm. Kulindeleke nezimvula ezibuthakathaka empumalanga yeCatalonia nasezindaweni zomphakathi waseValencian.
Isibikezelo semvula sangoMgqibelo
NgoMgqibelo imvula izoqhubeka enyakatho nenhlonhlo, futhi ingahle ifike ku-10mm eCantabria naseBasque Country. Eningizimu ye-Andalusia kulindeleke ukuthi bawele phakathi kuka-0,5 no-5mm. Amaconsi ambalwa angawela eningizimu yeMallorca.
Isibikezelo semvula ngeSonto
NgeSonto isimo sizoqala ukujwayeleka enhlonhlweni. Izimvula zizoqhubeka nokuba buthakathaka, kanti nenyakatho yenhlonhlo akulindelekile ukuthi yehle ngaphezu kwe-10mm, ikakhulukazi e-Asturias naseCantabria. Izimvula ezibuthakathaka kakhulu zingabhaliswa enyakatho-ntshonalanga yeMallorca.
Bayalinda Umoya wezinto ezisenyakatho ozoqina ngezikhawu ezinamandla kakhulu ezindaweni ze-northeast quadrant naseziqhingini zaseBalearic. Ngokuya ngosuku, izinga leqhwa lizoba phakathi kwamamitha angama-300 kuya kwangu-800 enyakatho eyedlulele. Kungenzeka kakhulu ukuthi ukuwa kweqhwa okuphawulekayo kuzobhaliswa ePyrenees nasezintabeni zaseCantabrian. Kepha, njengokujwayelekile, ake sikubone ngokuningiliziwe:
Isibikezelo sethempelesha sangoLwesihlanu
Okwakusasa, uLwesihlanu, amakhaza afinyelela ku -4ºC kulindeleke ezingxenyeni eziningi zasenyakatho nenhlonhlo: i-Asturias, iCantabria, inyakatho ye-Aragon neCatalonia, eningizimu-mpumalanga yeCastilla y León, naseningizimu-ntshonalanga ye-Aragon.
Isibikezelo sethempelesha sangoMgqibelo
NgoMgqibelo kuzoba usuku olubandayo. Ama-Frosts kulindeleke ukuthi eningi i-peninsula, engaba ngaphansi kwe -8ºC enyakatho yeCatalonia, futhi ibe phansi njengo -4ºC e-Asturias, eCantabria, eMadrid nase-Aragon.
Isibikezelo sethempelesha ngeSonto
NgeSonto amakhaza afinyelela ku -4ºC kulindeleke emaphoyinti aseningizimu yeCastilla y León, eMadrid, amaphuzu eCastilla y La Mancha, engxenyeni esempumalanga ye-Andalusia, nasenyakatho yeCatalonia.
Isibikezelo somoya sangoLwesihlanu
NgoLwesihlanu umoya uvame ukuba buthakathaka ofike ku-20-29km / h engxenyeni esempumalanga yenhlonhlo naseCanary Islands. Eziqhingini zaseBalearic umoya ungaba namandla, kuze kufike ku-62km / h enyakatho yeziqhingi, kuze kufike ku-50km / h eningizimu.
Isimo solwandle sizoba sibi kusasa ogwini lwaseCantabrian, ngamagagasi afinyelela kumamitha ayisithupha, naseMedithera, ngamaza ka-6 kuye ku-3m.
Isibikezelo somoya sangoMgqibelo
NgoMgqibelo umoya uzobuthaka. E-Canary Islands izoshaya cishe ku-29km / h, njengaseziQhingini eziningi zaseBalearic, lapho kulindeleke ukuthi idlule ku-30km / h e-Ibiza.
Isimo solwandle sizoba sibi eMedithera.
Isimo sezulu sangeSonto
NgeSonto izoqhubeka nokuncipha, yize e-Ibiza naseMenorca ingashaya ngamandla kakhulu, ifike ngejubane lika-62km / h.
Isimo solwandle sizoqhubeka nokuba sibi eMedithera, ngamagagasi angadlula amamitha ama-4 ngasenyakatho-mpumalanga yeCatalonia naseMenorca.
Uma ufuna ukufunda isaziso se-AEMET, chofoza lapha.
Ukuze, ukuqapha okukhulu uma kufanele uthathe imoto kulezi zinsuku. Sizoqhubeka nokubika lezi zindaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Amazinga okushisa azokwehla eSpain kusukela kusasa
Umklomelo Wokushintsha Kwesimo Sezulu kaSyukuro Manabe noJames Hansen